Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-Italy! - I-LucidPix
Izindawo ezihamba phambili zokuvakashela e-Italy!
Ingabe ufuna ihlobo laseYurophu? Sikunikeza uhlu olukhulu lwezindawo ezinhle ongavakashela e-Italy! Ukusuka emadolobheni amancane kuya emadolobheni amakhulu, i-Italy yaziwa ngokubuka kwazo okuhle olwandle, isimo sezulu esifudumele futhi ngokungangabazeki, ukudla kwabo okumnandi. Ngakho-ke, iyiphi indlela engcono yokukukhombisa izindawo ezinhle ongavakashela e-Italy kunokuzaba ku-3D usebenzisa iLucidPix.
Mhlawumbe indawo eyaziwa kakhulu e-Italy, iRoma iyikhaya lezimpawu ezithile ezibandakanya i-Colosseum, iTrevi Fountain, Izinyathelo zaseSpain kanye ne-The Vatican, ukubala abambalwa. Kusuka vakashela iminyuziyamu ukudla iphitsa ePiazza San Pietro (uvote isikwele esihle kakhulu esingu- # 1 eRoma), qiniseka ukuthi ngeke ukhungatheke phakathi nohambo lwakho.
Lo muzi omncane onqenqemeni lomgwaqo ogwini lwe-Amalfi uthole ukuthandwa phakathi kwama-blogger okuhamba, abasebenza ngokuxhumana nabezindaba Osaziwayo bohlu lwe-A eminyakeni yamuva sibonga isimo sayo esihle kakhulu. Ukubukwa kolwandle kanye namabhishi amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka yikhona okwenza leli dolobhana liqhamukele ezinhlanganweni eziphikisayo zaseYurophu.
Idolobha elihle laseFlorence inhlokodolobha yesifunda sase-Italy iTuscany. Kuqhathaniswa neRoma ngoba inezizathu eziningi zomlando neziza izivakashi ezingazibona futhi zidalule isiko lase-Italy.
Inhlokodolobha yezwe lomfashini emhlabeni, iMilan yaziwa ngokuqoqa kwabo okukhulu kwemikhiqizo yomklami. Ngokungangabazeki, iMilan Fashion Week iyangenisa Izivakashi ze-20,000 kufakazela ukuthi yindawo efunwa kakhulu futhi ekhethekile yokuba phakathi kwezinyanga ze-Autumn.
Wake waya kulezi zindawo e-Italy? Guqula izithombe zakho zokuhamba zibe yi-3D ngokusebenzisa iLucidPix futhi ungakhohlwa ukusithega ithuba lokufakwa Instagram wethu!
Amathiphu we-Great Animal Photography →← Ungayisebenzisa kanjani i-Hiking Photography Nge-LucidPix